क्यान्सर रोगबाट पीडित शान्ता चौधरीलाइ आर्थिक संकट::RATONEWS
क्यान्सर रोगबाट पीडित शान्ता चौधरीलाइ आर्थिक संकट
काठमाडौं, १५ पुस । पूर्व सभासद शान्ता चौधरी गम्भीर आर्थिक संकटमा परेकी छिन् ।
क्यान्सर रोगबाट पीडित शान्ताको जोहो गरिएको पैसा बाटोमै हराएपछि उनी आर्थिक संकटमा परेकी हुन् । हाल उनी क्यान्सर रोगको निरन्तर उपचार गराइरहेकी छिन् ।
यस्तो छ शान्ताद्धारा जारी गरिएको अपीलः
“अत्यन्त जरुरी अनुरोध!!!
पुरानो रोग [क्यानसर] को फलोअप (नियमित चेकअप)का लागि राजीव गान्धी अस्पत्ताल दिल्ली जान आज साँझ (पुष १३ गते) नयाँ बसपार्कबाट बस चढ्ने बेलामा उपचार खर्चको लागि जुटाएको रु ७४०००/- (चौहत्तर हजार), एटिएम र अस्पत्तालका कागजात लगायत अन्य महत्वपूर्ण कागजपत्र हराएको/ चोरी भएको(?) हुँदा पाउनु हुने महानुभावले फोन नं ९८५११७२७५७ मा मलाई वा ९८५११२७७५७ (डा‍. भीष्म भूसाल) वा नजिकको प्रहरी चौकीमा बुझाइदिनुहुन अनुरोध गर्दछु। बुझाउनु हुने महानुभावलाई उचित पुरस्कार दिइनेछ।“
शान्ता चौधरीको कथा असोचनीय छ। आठ वर्षकी सानी बालिका हुँदादेखि २५ वर्षको उमेरसम्म एकजना जमिन्दारको घरमा कमलरी बसेर बिना पारिश्रमिक कठोर जीवन गुजारेकी शान्ता चौधरी, कमलरीबाट उम्किन सफल भएपछि उनीहरूको मुक्तिका लागि संघर्ष गर्न थालिन्।
उनी २०६४ सालको संविधानसभामा नेकपा एमालेका तर्फबाट कमलरीको प्रतिनिधित्व गर्दै समानुपातिक सभासद् बनिन्।
सामान्य लेखपढमात्र गर्न सक्ने उनले अंग्रेजी अक्षर सिकिन्, कम्प्युटर सिकिन् र प्राकृतिक श्रोत साधन समितिको सभापति हुँदा आफ्नो कामबाट सबलाई प्रभावित पारिन्। संविधानसभाको विघटन पछि “कमलरीदेखि सभासद्सम्म” नामक पुस्तक प्रकाशन गरिन्। राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चको केन्द्रिय उपाध्यक्ष बनिन्।
यसबीच उनलाई क्यानसर भयो, जसको उपचार अझै सकिएको छैन। उनका श्रीमान पनि उनीबाट अलग भए। अहिले उनका छोरा कक्षा ९ मा र छोरी कक्षा ७ मा पढ्दैछन्। उनी कक्षा ८ मा पढिरहेकी छिन्। सबै प्रतिकुलताका बाबजुद उनको अनुहारमा मैले कहिल्यै उदाशिनता देखिन। उनी सधैं हाँसेकै हुन्थिन् र सधैं पीडालाई पनि शकारात्मक दृष्टिकोणबाट ब्याख्या गर्दथिन्। माथिको उनको पहिलो फेसबुक स्टेटसले पनि उनीमा निहित त्यही शकारात्मकतालाई संकेत गर्दछ।
अस्ति थप उपचारका लागि बल्लबल्ल जुटाएको रू ७४ हजार लिएर जान लाग्दा उनले त्यो हराइछन्। उनी यो देशकी सितारा हुन्। त्यो रकम भेट्टाउने व्यक्तिकहाँ यो सन्देश पुगिदियो भने, उनको कथा सुनेर पनि ती व्यक्तिको मन पग्लेला भनेर मैले यति लेखेको हुँ। सन्देशलाई सबैतिर पुर्याउने जिम्मा तपाईंलाई पनि छोडेको छु।